Ny Tanànakely Shinoa Ao Grenada · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Septambra 2017 4:14 GMT
Avy amin'ny bilaogin-tsary Caribbean Free Photo:
Manamarika ny fidirana ao amin'ny toeram-panorenana hanaovana Kianjam-pirenena vaovao ao Grenada ao amin'ny Zaridainan'ny Mpanjakavavy ( Queen's Park), izay natsangana miaraka amin'ny famatsiam-bola, ny fahaiza-manao ary ny herin'ny mpiasa avy amin'ny Repoblika Entim-Bazhoakan'i Shina ity endrika vavahadibe somary hafakely ity. Ahitana ireo mpiasa mpanorina mihoatra ny 500 avy any Shina izay mipetraka sy miasa ao amin'ny toerana, dia efa novaina tamin'ny fomba virtoaly ho tanànakely Shinoa ilay faritra miaraka amin'ny zaridaina .
Ny fanaovan'ny mpiasa Shinoa rehetra satro-by , miaraka amin'ny kiraro malefaka vita amin'ny lamba henjana izay hany azo ekena hanaovana ao amin'ny toeram-panorenana no zavatra iray izay nanaitra ahy tamin'ny fitsidihako tao an-toerana tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity. Rehefa nanontany ilay lehiben'ny tetikasa Grenadiana aho momba izany, dia namaly izy fa “izany no kolontsain'izy ireo.” Araka ny voalazan'ny lehiben'ny tetikasa, dia manao lasiesta kely aorian'ny sakafo atoandro ireo mpiasa Shinoa ary tsy misotro rano mangatsiaka. “Fa rano mafana sy dite fotsiny ihany”, hoy izy, izay manazava ny antony hisian'ireo fisotroana kafe miloko khaki hita manodidina rehetra eny .